Terena Hametraka Fitaovana Fanarahamaso Amin’ny Findainy Ireo Mponin’i Xinjiang any Shina · Global Voices teny Malagasy
Terena Hametraka Fitaovana Fanarahamaso Amin'ny Findainy Ireo Mponin'i Xinjiang any Shina
Voadika ny 07 Aogositra 2017 15:55 GMT
Vakio amin'ny teny English, Español, Deutsch, Français, English
Fitaovana fanarahamaso ny fifandraisana manokan'ny tena any Xinjiang, avy amin'ny mpampiasa Twitter 即时中国大陆映像
Voatery mametraka fitaovana fanarahamaso amin'ny findainy ireo mponin'i Xinjiang, foko vitsy an'isa ao amin'ny faritany andrefan'i Shina.
Ny 10 Jolay, naharay fampilazana tamin'ny finday avy amin'ny governemantan'ny distrika ireo mpampiasa finday ao amin'ny Distrikan'i Tianshan ao amin'ny Tanànan'i Urumqi, manome toromarika azy ireo hametraka fampiasa (App) fanarahamaso antsoina hoe Jingwang (na “Fanadiovana Vohikala”). Milaza ilay hafatra fa natao “hiarovana [azy ireo] tsy ho tafiditra amin'ny loharanom-baovaon'ny mpampihorohoro” ilay fampiasa.
Kanefa mety mampiasa ilay fampiasa ho amin'ny zavatra hafa ankoatry ny fanoherana ny mpampihorohoro ihany koa ireo manampahefana. Araka ny tatitra manokana tamin'ny Radio Free Asia, vehivavy Kazakh 10 no voasambotra tao amin'ny Prefektiora Mahaleotena Ili Kazakh, noho ireo hafatra nalefa tamin'ny fiseraseràna manokana tao amin'ny vondrona WeChat, fotoana fohy taorian'ny nametrahan'izy ireo ilay fampiasa.
Nilaza ny fampilazana avy tamin'ny polisy fa ahafahana mamantatra ny toerana sy manaraka ireo loharano ary làlana fanapariahan'ny mpampihorohoro hafatra ilay fampiasa, ary hatramin'ny hetsika “fivavahana tsy ara-dalàna” sy “loharanom-baovao mampidi-doza,” tafiditra amin'izany ireo lahatsary, sary, ebooks ary antonta-taratasy.
Milazalaza momba ilay fampiasa toy izao manaraka izao ny vohikalan'ny Jingwang:
Tolotra fiarovana misy rafitra fanasokajiana ny lehibe sy ny ankizy nampidirin'ny Jiangsu Telecom ny Jingwang. Ny tena asany lehibe indrindra dia ny hibahana ireo vohikala vetaveta, fisolokiana anatin'ny Aterineto, rindrambaiko mpamotika, ary ireo vohikala mpijirika; manaitra ireo mpampiasa momba ny habetsaky ny fotoana lanin'izy ireo eo amin'ny Aterineto; ary mba hahafahana manao fanarahamaso avy lavitra ny tambajotranao ao an-trano. Natao hanampy ireo ankizy hanefy fomba fiaina ara-pahasalamana ilay fitaovana, amin'ny fanamboarana fanivanana azo antoka ny vohikala ho an'ireo tsy ampy taona.
Mazava ho azy, afaka ampiasaina amin'ny fomba maro samihafa ny fitaovana rehetra manana ireo fahafahana ireo. Ohatra, ilay lafiny “fifehezana avy lavitra” amin'ilay fampiasa dia ahafahan'ireo mpiantsehatra ao amin'ny fanjakana na ireo mpijirika mihitsy mikirakira na mangalatra avy amin'ny tambajotra ao an-tranon'ny olona iray.
Mifanaraka amin'ireo fepetra fanarahamaso hafa amin'ireo asa nomerika ato eo amin'ny faritra ilay hetsika. Raha matetika ireo tantaran'ny fanivanana nomerika any Shina no mifantoka amin'ireo zavatra iainan'ireo mpampiasa, izay ny ankamaroany no any amin'ireo tanàna goavana any atsinanana sy atsimo, maizimaizina kokoa matetika ny tena zava-misy ho an'ireo miaina any amin'ny toerana somary misintaka, ireo miaina any amin'ireo faritry ny foko vitsy an'isa toy ny ao Xinjiang sy Tibet. Mitady ny hifehezana ireo korontana sy ireo tsy fahafaliana any amin'ireo toerana misy fifandonana, matetika ireo manampahefana no mametraka an-tery fanivanana tafahoatra sy fepetranà fanarahamaso ary fanakatonana matetika ny Aterineto.
Fampahalalam-baovao iray mitoetra ao amin'ny Twitter, “Sary avy ao amin'ny tanibe Shina” (即时中国大陆映像), izay mamoaka ireo vaovao voasivana ao Shina, no nandefa sary azo teny amin'ny toeram-pisavana izay anaovan'ireo polisy fisavàna toy ny antsapaka an'ireo mponina mba hijerena raha efa nametraka ilay fampiasa fanarahamaso izy ireo:
Misava ireo manampahefana ao Xinjiang mba hahazoany antoka fa tena mampiasa ilay fitaovana ofisialy Jingwang tokoa ny olona. Nisy fampilazana tamin'ny finday nangataka ireo olona mba hametraka ilay fampiasa ao anatin'ny 10 andro. Raha toa izy ireo tratra eny amin'ny toerana fisavàna ka tsy misy ilay rindrambaiko ny findainy, mety ho voatàna am-ponja 10 andro izy ireo. Fihemoran'ny fivoaran'ny teknolojia io. Teren'izy ireo hampiasa ireo fitaovana natokana ho an'ny olona be taona ny olona. Endriky ny fanokanan-toerana amin'ny alalan'ny teknolojian'ny fanarahamaso io. Miverina any amin'i Shina-n'i Mao isika.
Namoaka ny mombamomba ny vokatry ny Jingwang ihany koa ny “Sary avy amin'ny tanibe Shina” (即时中国大陆映像), izay nanazava fa afaka manafoana ny tenimiafina takian'ny rafitra Windows ilay fitaovana ary afaka miditra ao anatin'ny solosaina rehetra tsy misy sakantsakana.
Vao tafapetraka ny Jingwang, lasa rojo vy elektronika avy hatrany ireo solosaina sy finday any Xinjiang.
Angamba ho valin-kafatra amin'ny fitakian'ny kaomitin'ny antoko eo an-tanàna mba hifehezana ny fizaràna ny votoaty tsy ara-dalàna ilay fitakiana ny hametrahana ny Jingwang. Tsy maintsy manaraka ireo toromarika avy amin'ny Cybersecurity Office amin'ny fitantanana ny solosainy sy ireo tambajotran-tserasera avokoa ireo sampana ao amin'ny fitondrana sy ny governemanta, ary ireo andrim-panjakana mikambana amin'ny antoko, tafiditra amin'izany ny anjerimanontolo sy ireo fikambanana mpikaroka.
Nanisy teny ny vaovaon'ireo fomba vaovao fanao amin'ny fanarahamaso ihany koa ny tatitra vao haingana avy tamin'ny Freedom House, vondrona mpiaro zon'olombelona mitoetra any Etazonia:
Tany Xinjiang, ny 27 Jona, ireo manampahefana ao amin'ny distrikan'ny renivohitra rezionaly Urumqi dia namoaka fanambaràna nanomezana toromarika ireo mponina rehetra sy ireo tomponà fandraharahàna mba hanome “karapanondrony manokana, findainy, famakiana diska ivelany, fitaovana fitahirizana entin-tànana, solosaina entin-tànana, ary ireo karatra fitahirizana” eny amin'ny polisy ao an-toerana mba ho “raiketina sy halaina sary amin'ny scanner” hatramin'ny 1 Aogositra.
Ny tanjona dia ny hijerena sy hamafàna ireo “lahatsary mpampihorohoro” rehetra, kanefa manitsakitsaka ny zon'ireo mponina telo tapitrisa ao Urumqi mba hanana ny fiainany manokana ilay hetsika, ary mametraka azy ireo manoloana ny fanasaziana amin'izay mety ho fandikandalàna maro mety hisy, tafiditra amin'izany ireo mifanaraka amin'ireo fivavahana am-pilaminana na fanehoan-kevitra ara-politika.
Shina 20 ora izay